ကြေးနီစီမံကိန်း ခြံစည်းရိုးတိုးချဲ့ခတ်ရန် စီစဉ်မှု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကန့်ကွက်
23-Sep-2017 tagged as မုံရွာ
Monywa, Sept. 23
Works to the copper mine Wanbao, the company plans to extend the fence project has been regional and national representatives objected Salingyi No.2constituency MP Dr Naing said.
“ကုမ္ပဏီက မြေဧက (၉၆၀ဝ) ပြည့်ဖို့ ခြံစည်းရိုးတိုးခတ်မယ်။ ဧကနှစ်ထောင်ကျော် ခတ်ဖို့ ကျန်နေသေးတယ် ဆိုပေမယ့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ရေရှည်သယံဇာတ ထုတ်ဖို့ကိုခွင့်ပြုပြီလား၊ ခွင့်ပြုမှလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောရတာပါ။ တိုင်းအစိုးရနဲ့ ကုမ္ပဏီက တိုးချဲ့ချင်ပေမယ့် ပြည်သူတွေဘက်က အခက်အခဲတွေရှိမယ်၊ သူတို့ကြားကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးတာပါ”ဟု ဒေါက်တာသိန်းနိုင်က ဆိုသည်။
ဒေသခံတောင်သူများ တောင်းဆိုထားသည့် သီးနှံလျော်ကြေး မပေးနိုင်ကြောင်းကို ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတွင် ပြောကြားထားသည့်အပြင် လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာပါအရ မူလ တောင်သူများထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည့် ယာမြေများ ခြံစည်းရိုး တိုးခတ်ခြင်းကို မိမိတို့ လုံးဝ ကန့်ကွက်ကာ ရွာမှလည်း ဖယ်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း ဆည်တည်းရွာဟောင်းတွင် လက်ရှိနေထိုင်သည့် ဒေသခံ ဒေါ်ရီဝင်းက ပြောကြားသည်။
The mine investigation initiated by the Commission as the Chairman's report points Suu Kyi's call forahalt to the project does not follow that erect signs that they were on September 13, according to residents.
Ye Htut, the region MP Dr Naing and the National Assembly on September 22 inavillage near the copper mine said, Thunderstorms are close to the project and the old village of Sete Quick question followed by the demand for local problems.